VTECH muna AMCC 2018 - Vday chirungiso Manufacturing Technology Co., Ltd.
nguva: 2019-07-30 Hits:
In July, Chiitiko chinokosha mu chirungiso kugadzira munda grandly yakavhurwa Hangzhou!
On July 26th kuti 28th , pakanga pamusoro 300 emakambani vaiitawo chirungiso Manufacturing Conference of China 2018. Musangano uyu rinoshora zvakasimba marudzi akaratidza kubudirira zvikuru chebasa utsanzi uye mutyairi zvikumbiro mu chirungiso kugadzira mumunda. kunze, ose zvebhizimisi akasimudzira michina yavo, zvinhu uye zvakaisvonaka dambudziko.
Somunhu nyanzvi mugadziri unobereka micro & Nano akangwara simbi Nezvakakuyiwa zvinhu, VTECH inoomerera kutenda zvakangwara kugadzira yemberi huru, ndehwokuti dzichiri VTECH sezvo yakakwana uye zvikuru nyanzvi fekitari munyika, uye rinoenderana waiti "chirungiso Manufacturing kunoita kuti tibvunze vatyairi itsva kukura". Vazhinji indasitiri vechikamu uye vashanyi vakauya dumba zvakadzama kutaurirana.
VTECH’ dumba akanga mufanidziro. Chinoumba chigadzirwa Ti-kwakavakirwa chiwanikwa Nezvakakuyiwa uye ayo SEM mifananidzo yaiva frontal simba "rova". Huru customized mabasa aiva lateral "kurwisa". Uyezve, Vashanyi vakawanda akanga zvachose nokukwezvwa yakarongeka Nezvakakuyiwa zvigadzirwa, akadhindwa zvidimbu, mabhurocha boka uye hourglass Nezvakakuyiwa mukati.
1, The President Mr. Wang akataura mutungamiriri indasitiri cheni; A bhururu wokutengesa dhipatimendi akasuma zvigadzirwa vaenzi.
2, Mr. Wang akatsanangura nechido.
3, General Manager Mr. Xiong akataura mushandi nevezvenhau.
4, "Round Table” musangano
munguva ichi musangano, VTECH rinoshora zvakasimba marudzi akaratidza yepamusoro uye zvigadzirwa siyana uye akatanga customized mabasa. Panguva imwe, VTECH akaita kumuzikamwi vakawanda indasitiri vechikamu, uye pakanga kunyange vashanyi zvinganaka kushanyira VTECH uye fekitari wokuzokurukuriranazve uye pamwe. The zvakadzama ubanguranyika uye kutaurirana zvabatsira bilateral cognition uye ruzivo, kuita vanhu azere chivimbo uye nokutarisira mune zvaizoitika kuti bhizimisi uye boka.
Thanks zvitsva nezvitsaru vatengi ' inotsigira iyi musangano.
Tarira mberi inotevera zvekare!
adhiresi: No.138, Jinzhou Avenue East, Jinzhou New Area, Ningxiang County, Hunan Province, China.
KUMASHURE2018 World Congress musi Powder Metalluray (WORLDPM2018)
NEXTAnotarisirwa Pamwe chete Customers Korean